Noma yimuphi umuntu nsukuzonke usebenzisa ikhompyutha siqu, ngandlela-thile ebhekene izinto ngokuthi amafayela, amelela ezinye iziqukathi ngolwazi ukukhonza ngenxa yezizathu ezehlukene. Kodwa lokhu akulona njalo msebenzisi fully aware ukuthi imithetho ukuqopha igama lefayela kufanele ilandelwe, yingakho ngokuvamile kakhulu kungase kube amaphutha abanye nokungaboni ngaso linye. Ubani ukuhlola izindaba eziphathelene igama lefayela ngendlela eqondile kakhulu.
Kuyini e igama lefayela
Asiqale nge incazelo into, ngokuthi ifayela. Lapha-ke kumele aqondwe ngokucacile ukuthi ukuqokwa onjalo iyunithi Imininingwane inezingxenye ezimbili: igama isandiso.
Igama, yebo, kungaba kabi amandla akhe, kodwa isandiso kubonisa uhlobo lwefayela, futhi ngokuyinhloko inquma, lokho ngezinhloso kuhloswe. Ngokwesibonelo, wonke umuntu uyazi ukuthi amafayela elisebenzisekayo ezimisweni Windows ezisebenza ngokuvamile banesikhathi isandiso .exe, .bat, nokunye .sfx. D. ihluzo ethulwa ngesimo lezinto ne .BMP isandiso, .jpg ,, jpeg, .png futhi abanye. idatha lomsindo kungahambisani uhlobo amafayela .WAV, .mp3, .wma, .ogg, nabanye. Imiqophi uthumele amafayela .avi, .wmv, .mov, .mkv, .ts, nokunye. N.
Nokho, kungakhathaliseki ukuthi yini isandiso ifayela kuyinto, kukhona amafayela athile kanye imikhawulo amagama abo. Yini kahle hle, sizobona manje.
Yiziphi imithetho ubhala igama ifayela kufanele kuqashelwe
Okokuqala-ke Kuyaphawuleka ukuthi imithetho isabelo egameni into ethize ngqo ngokuthi iliphi yokusebenza ifayela izinhlelo esetshenziswa kukhompyutha. Akukhona njalo "OSes" amagama ifayela uyobheka okufanayo. Okokuqala ukubheka ku-Windows kusuka FAT futhi ifayela NTFS izinhlelo.
In izinhlelo ezinjalo, amafayela kungenziwa ngokuthi yini ofuna ukuyisho. Nokho, kumelwe sicabangele ukuthi ukusetshenziswa nhlobo kwezinye ekhethekile izinhlamvu ikholoni uhlobo, umugqa etshekile noma mpo, unobuza, kubakaki elingunxantathu, asterisk, nokunye .. Abanye "ochwepheshe" zithi, kanye izinhlamvu ngenhla, awukwazi ukusebenzisa amagama equkethe izingcaphuno. Kwenziwe into enjalo! Imikhawulo zisebenza kuphela ukuthi umlingiswa, esetshenziswa on the ikhibhodi English layout ( "). "Russian" bokhulunyiwe ( "") zingafakwa kalula.
Isibalo esiphezulu lezinhlamvu igama lefayela
Manje amagama ambalwa mayelana lonke inani kanye namagama ukuthi kungenziwa eziqukethwe igama iyiphi into. Endabeni le "OSes zakamuva» Windows umndeni Ubude igama lefayela akukwazi ukundlula ukubaluleka izinhlamvu ezingeqi kwezingu-255. Lokhu ngenhlanhla engaguquguquki nakancane ne sibalo ibhithi ulwazi oludingekayo nganoma yisiphi ihlelo oluthile.
Ngasinye uhlamvu, isigamfulo, inombolo noma incwadi kugcinwa njengoba ibhayithi olulodwa noma izingcezu eziyisishiyagalombili. Ngakho, uma igama yakhiwa izinhlamvu eziyishumi, igama ngokwayo kuzothatha 80 izingcezu. Lo mthetho iwukuba bonke izinhlelo okufanayo.
Noma kunjalo, inani lezinhlamvu uma kuboniswa uhlobo olufanayo amafayela ohlelweni olusebenzisayo ezahlukene zingahluka. Isibonelo elula amafayela umbono wadala e-Windows, usebenzisa kwimenenja yefayela Norton Commander in DOS uhlelo, egameni kuphela izinhlamvu zokuqala ezimbalwa, bese ngokuzenzakalelayo ubeke uphawu "~". izinguquko ezifanayo kungabonakala nasemkhakheni ezinye OS. Isibonelo, uma ubheka igama ifayela akuyona isicelo se-Windows noma ayifani omunye izinhlobo, igama mfushane ukuze ngowokuqala izinhlamvu eziyisithupha ngaphandle izikhala.
Manje umbuzo yini vele lobusa igama lefayela ukurekhoda kufanele ulandele, asihambe olwengeziwe. Njengoba kusobala okweqa senombolo yezinhlamvu egameni ifayela, isibonelo, uma kukhona ukuqanjwa kabusha futhi ngezinye izikhathi ekopisha noma ezihambayo, uhlelo umane ngeke ukwazi ukulondoloza ke ngendlela entsha. Isikrini ngeke vele uthayiphe iphutha "Igama lefayela lide kakhulu."
Nakanjani ukuthi awukwazi ukushintsha isandiso, kakhulu, ngisho noma umsebenzisi ezama ukuqamba kabusha amafayela yohlobo olufanayo (isib, iZwi umbhalo imibhalo zilondolozwe kuyi-PDF). Ukuze wenze lokhu, udinga ukusebenzisa amathuluzi akhethekile. Qamba kabusha le ndlela kungenzeka ngaphandle kokuba .txt ifayela umbhalo, ukushintsha isandiso, ezifana .bat (ifayela elisebenzisekayo). Nokho, uma umbhalo awusho ukuthi sizoba umyalo, ifayela eyovulwa ku "incwajana" evamile, yilokho kuphela. Uma amaqembu akhona futhi ibhalwa isintheksi elungile, ifayela eziyokhishwa, uma kungekhona ngemuva, uhlobo kuthiwani sibona ngaleso umugqa wemiyalo uma ugijima noma umsebenzi endaweni yefa DOS uhlelo.
By endleleni, uma thina ukubhekana umbuzo yini vele lobusa igama lefayela ukurekhoda kufanele kuqashelwe, impela kahle, kufanele kuphawulwe ukuthi eziningi izinhlelo ukuze siphinde sithole ulwazi asuswe "Recycle Bin", usebenzisa isimiso igama yokusesha. Iqiniso liwukuthi uma ususa ifayela is hhayi ngokwenyama suswa hard drive, ushintsha kuphela uhlamvu lokuqala uphawu "$". Uma wemboni equkethe lolu lwazi engakaze overwritten, uhlelo ibona ifayela njengoba kufanelekile yokutakula.
Indlela yokwenza ukwakheka Megan Foks?
Recruitment Agency - kungcono ... I Recruitment Agency eyaziwa kakhulu eMoscow Petersburg
Cefekon D: incazelo emfushane yokulungiselela